हलेसीको धार्मिक सहिष्णुता देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री तीनछक - Tesro Ankha
हलेसी (खोटाङ) । बुधवार (मंसिर १९ गते) साँझ खोटाङको हलेसी आइपुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईले यहाँको धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव देखेर आफू तीनछक परेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हलेसीको प्रवद्र्धन गर्न सके संसारकै नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने दाबी गरे । राज्यले ध्यान दिन सके हलेसीलाई संसारकै नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउन समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो ।
नयाँ शक्ति पार्टी संयोजकसमेत रहेका भट्टराई खोटाङ भ्रमणका लागि स्कारपियोमा हलेसी आइपुगेका थिए । पूर्वमन्त्री र कृषिविद् मदन राईसँग हलेसी आइपुगेका उनले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इबन राईसँग १५ मिनेट भेटघाट गरेका थिए ।
भेटमा के–के कुरा भए ? ‘पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानी भयो,’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर राईले सुनाए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले हलेसीमा पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भएकोमा खुसी देखिनुभयो ।’
हलेसीको होटल हेलसी भिलेजमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईले मंसिर २० गते हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगरसभामा विशेष सम्बोधन गर्ने मेयर इबन राईले जानकारी गराए । अपराह्न १ बजेबाट सुरु हुने नगरसभालाई सम्बोधन गर्नअघि बिहान १०ः३० देखि ११ः३० सम्म नगरपालिकाले तयार पारेको प्रारम्भिक गुरुयोजनाबारे छलफल गरिनेछ । डा. भट्टराई आर्किटेक्ट इन्जिनियरसमेत रहनुभएकाले उहाँसँग छलफल गर्दा फलदायी हुने मेयर राईको ठम्याइ छ ।
२०७५ मंसिर २० ००:०८